Mamorona tambajotram-by any Eropa miaraka amin'ilay World Train Conductor World | Androidsis
Avy tao Kairosoft herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanana simulator tsara momba ny gara izahay izay tsy maintsy anananay ireo toerana tsara indrindra mba hahatsapan'ny mpandeha an-trano alohan'ny hisamborana ny fiaran-dalamby izay hitondra azy ireo amin'ny toerana alehany. Iray amin'ireo lalao video avy amin'ity fandinihana ity izay mampifandray antsika ary mampanalavitra ny filalaon'ny lalao vao natomboka vao haingana antsoina hoe Tracky Train ary inona no manaitra antsika ny filalaovany arcade be indrindra, zavatra tsy mitovy amin'ny efa nahazatra antsika tamin'io franchise io fantatra amin'ny anarana hoe Railroad Tycoon. Tsy dia misy lalao firy amin'ity karazana ity ary ny marina dia manantena izahay fa hisy bebe kokoa hahatonga antsika hitondra izay zotram-by iray manontolo izay mety hiparitaka manerana ny kaontinanta iray manontolo.
Ity dia mihoatra na latsaka izay tratran'ny Train Conductor World, lalao video piozila izay tsy maintsy hitadiavanao azy ireo hahafahan'ireo lamasinina mamakivaky ireo làlana telo hahatratra ny toerana alehany. Lalao video mahafinaritra izany afangaro ny puzzles amin'ny fanamboarana misy ny làlana ahafahana mampifandray tambajotram-by izay hitety ny ankamaroan'ny firenena ao amin'ny kaontinanta eropeana Train Conductor World dia lalao video misy kalitao faran'izay mavitrika amin'ny fomba fijery ary ao amin'ny lalao mekanika dia tsy ampoizina noho ny fahatsorana ny fiovan'ny làlambe ka mandeha amin'ny lala-mahitsy ireo lamasinina miloko telo ary amin'izay ianao afaka mandroso amin'ny alàlan'ny atiny azo alaina ao amin'ny The Voxel Agents, ilay studio namorona ity sangan'asa avo lenta ity.
1 Manitatra ny tambajotram-by manerana an'i Eropa
2 Mitety an'i Amsterdam, Paris ...
Manitatra ny tambajotram-by manerana an'i Eropa
Ny Voxel agents tsy rookie izy ireo raha resaka lalao video misy ifandraisany amin'ny lamasinina. Efa namoaka lalao video roa ho an'ny Android izy ireo ary ny iray tamin'izy ireo dia ny Train Conductor 2: USA. Ary io Train Conductor World io dia manana ny singa fototra telo ho an'ny lalao iray mahavariana: lalao mahafinaritra, sary tsara ary mahafinaritra mahafinaritra izany.
Ny lalao dia mifangaro ankamantatra sy paikady, ary amin'ny ankapobeny dia mila mifehy ny alehan'ny lamasinina ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny iray amin'ireo lalana telo handalovany. Raha vantany vao miseho ny fiaran-dalamby iray amin'ireo loko telo (mena, manga sy mavo) dia azonao atao ny mampiato azy mba hifanaraka amin'ny lokon'ny lalamby ary hanohy hatrany ny tanjony. Ny fiaran-dalamby dia mety hiseho amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa ary indraindray aza maro loko mitovy amin'ny azy ireo no hita eo alohan'izy ireo.
Ny olana dia tonga rehefa mifanipaka izy ireo na saika hikasika, izay hiteraka fotoana lehibe iray izay vokarina tsara dia vita tsara mba hanehoana ny fahaizanao mandehandeha ka tsy nahitana loza lehibe izy ireo. Izy io dia lalao tena mavitrika ary iray izay afaka manantona anao izao noho ny mekanika lalao fotsiny.
Mitety an'i Amsterdam, Paris ...
Ny iray amin'ireo toetrany lehibe hafa dia ny ireo tontolo iainana izay itodihany ny fiaran-dalamby dia tena mahasarika maso amin'ny antsipiriany maro. Azonao atao ny mitsidika ny lakandranon'i Amsterdam na mamaky ny Arc de Triomphe any Paris. Ankoatr'izay ampahany mavitrika indrindra sy mavitrika indrindra, rehefa vitanao ireo ambaratonga ireo dia hahazo karazana endrika rehetra ianao amin'ny làlana izay hanampy anao hampifandray ny tamba-jotra ary mitsidika tanàna hafa.
Ianao koa dia manana safidy hanamboarana ny fiarandalamby izay mitondra fiara, medaly sy fahaiza-manao hafa izay manampy kalitao bebe kokoa amin'ny set feno natolotry ny Train Conductor World. Manana zava-bita isan'andro sy karazana fanamby rehetra ianao ary rafitry ny fotoana mavitrika izay hanome ireo lalao ireo zavatra manokana.
Afaka omenao izany maimaimpoana avy amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny micropayments mahazatra ho an'ny lalao tena izy izay azo antoka fa hahatonga anao ho tia.
Train Conductor World dia mitoetra amin'ny fahalavorariana amin'ny lafiny teknika sy rehetra gaga amin'ny kalitao lehibe natolotr'ity studio lalao video ity. Ny famolavolana ny lamasinina dia tsara, ny fanaingoana, ny tontolo iainana, ny fandokoana na ny vokatry ny feo. Majestic.
Train Mpitarika ny World
Ny lalao dia tsara
Fampiasana tsara ny fahaizanao ara-teknika rehetra
Ny ambaratonga lehibe
Developer: Ny Voxel agents
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Train Conductor World dia mametraka anao eo alohan'ny lalao piozila sy lamasinina haingam-pandeha